सीमाको सकस : बोल्न सके छुट, नसके तङ! खबरमञ्च
३० मंसिर, खबरमञ्च, at 7:30 AM
By खबर मञ्च / December 16, 2019 / Comments Off on सीमाको सकस : बोल्न सके छुट, नसके तङ!
काठमाडौं । भारत चण्डीगढमा २९ वर्षदेखि कार्यरत दाङका भीमबहादुर नेपालीलाई घर सम्झिँदा अहिल्यै जाऊँजाऊँ लाग्छ ।
जब घर जान भारत–नेपालको सीमा–नाका पार गर्नुपर्ने सम्झिन्छन्, मन गह्रुँगो भएर आउँछ ।
‘हमेसा बोर्डरमा समस्या भोग्नुपर्छ । बोल्न सक्नेलाई पुलिसले छाडिदिन्छन्, नसक्नेलाई तङ गर्छन् (दुःख दिन्छन्),’ निजी कम्पनीमा सुरक्षा गार्ड रहेका उनले भने। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा दिनेश रेग्मीले लेखेका छन्।
चण्डीगढमै कार्यरत रोल्पाका वीरबहादुर पुनको व्यथा पनि उही हो । ‘सामान खोलेर चेकपोस्टमा देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पैसा दिए छाडिदिन्छन्, नभए दुःख दिन्छन् ।’
उत्तर भारतीय क्षेत्र पन्जाब र हरियाणा दुवै राज्यको राजधानी चण्डीगढमा कार्यरत नेपालीले भोग्ने यसखाले समस्या साझा बनिसकेको छ । काम गर्न आएदेखि नै समस्या भोगे पनि अझै हल नभएको उनीहरूले गुनासो गरे।
Last Modified: December 16, 2019 @ 7:30 am